Maamulka shabeelaha dhexe oo dalbaday in ciidamo boolis iyo nabad-sugid ah la keeno gobolkaas – Radio Daljir
Agoosto 21, 2013 2:24 b 0
Jowhar, August 21, 2013 – Maamulka gobolka shabeelaha dhexe ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dalbanaya in is bedel lagu sameeyo howl-wadeenada dhinaca amaanka ee dowladda federaalka.
Gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe Cabdi Jiinow Calasow oo warbaahinta la hadlay, wuxuu sheegay in ay jiraan ciidamo ku sugan gobolka oo u badan meleteri AMISOM ah iyo kuwa dowladda federaalka ah.
Mudane Jiinow wuxuu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la keeno gobolka ciidamo isugu jira kuwa booliska iyo kuwa nabad-sugida dowladda federaalka ah, si loo helo howl-wadeeno inta badan ka hortaga dhibaatooyinka jira.
? Ciidamada dowladda federaalka ah iyo AMISOM ayaa haatan ka shaqeeya amaanka gobolka oo idil, aad bay uga shaqeeyeen nabad-gelyada, laakiin mar kasta waa muhiim in la helo ciidamo nabad-sugid ah? ayuu yiri Jiinow
Howgalka nabad illaalinta Midowga afrika ee AMISOM ayaa gacanta ku haya meelaha muhiimka ah ee gobolka iyo degmooyinka waa weyn, tan iyo markii sanadkii hore ilaa horaantii sanadkan gobolka laga saaray kooxda Al-shabaab.